Honey Moon Destination – NU MYAT AROUND THE WORLD
NU MYAT AROUND THE WORLD
ထူးခြားအံ့ဖွယ် အဘူဆင်ဘဲလ် Abu Simbel, Egypt
အီဂျစ်အသက်သွေးကြော ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး နိုင်းမြစ်ပေါ်ဖြတ်ကာ.. (Cruise on Nile, the Longest River on Earth)
ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအံ့ဖွယ်တစ်ပါး အီဂျစ်ဂီဇာပိရမစ်ကြီးများ (Pyramids of Giza, Egypt )
ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဘာသာရေးအဆောက်အအုံ ကာနက်ကျောင်းဆောင် (World 2nd Largest Religious Temple, Karnak Temple)
ကမ္ဘာ့ဒုတိယ အကြီးဆုံးနိုင်ငံ ကနေဒါ (Canada, World 2nd Largest Country)
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ 9/11 ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်နေရာသို့ (9/11 Memorial in New York, USA)
နယူးယောက်မြို့ရှိ ကွန်ကရစ်တောထဲက အိုအေစစ် Oasis of Concrete Jungle : Central Park, New York
World’s Longest Boardwalk, Atlantic City Boardwalk
ဟောလိဝုဒ်မှ ငွေကြယ်ပွင့်များရှိရာလမ်း (Hollywood Walk of Fame)
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှ Golden Gate တံတားကြီး
ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ဂရန်းကင်ညွန် ချောက်ကမ်းပါးကြီး (Grand Canyon, one of the7wonders of natural world)
ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ပထမဆုံးကျင့်သုံးခဲ့သည့် အာမေးနီးယား Armenia
ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံ ဘူတန်ရဲ့ ထူးခြားချက် (၁၂)ချက် (12 Interesting Facts about Bhutan)
ခမာတို့နိုင်ငံ ကမ္ဘောဒီးယား Cambodia,aCountry of Khmers
Great Wall of China, World’s Longest Structure
ဘေဂျင်းမြို့တော်၏ အထင်ကရ တီယန်နန်မန် ရင်ပြင်သို့ တစ်ခဏ (Tiannmen Square Beijing China)
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကိုယ်တစ်ပိုင်းရုပ်တုကြီးရှိရာ အိန္ဒိယမှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း…… Spiritual Unfoldment in Isha Yoga Center, India
အချစ်အလွမ်းတို့ ထုံမွှမ်းရာ အိန္ဒိယမှ တက်(ဂျ်)မဟာ (Taj Mahal, A Symbol of Love)
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဗုဒ္ဓပုထိုးတော်ကြီး ဘောရောဗုဒ္ဓေါ Borobudur , World Largest Buddhist Temple
အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ လှပသာယာတဲ့နေရာသစ်..မော်ရတိုင်းကျွန်းတွေဆီ… 🏝 (Morotai Island, the Pearl of Pacific Ocean; the charm of Indonesia)
တိုကျိုဒစ္စနေးကမ္ဘာ Tokyo Disney Land
ရွှေသမင်တို့၏ မြို့တော် နာရာ (Nara, the sacred City of Japan Bowing Deers)
လာအိုကို ဘန်ကောက်ကနေ ညရထားနဲ့သွားမယ် (Bangkok to Laos by Train)
သဘာဝအလှအပတွေကြား Adventure အစုံလုပ်လို့ရတဲ့ ကမ်းခြေမြို့လေး ကိုတာကင်နာဘာလူ (The Adventures in Kota Kinabalu, Malaysia)
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အရှေ့တိုင်းပုလဲ (သို့) အစားအသောက်မြို့တော် ပီနန် (Penang, the City of Foods @ Oriental Pearl of Malaysia)
လမ်းဘေးပန်းချီများဖြင့် အသက်ဝင်နေသော George Town မြို့ (Street Arts of George Town, Penang: Malaysia)
ကမ္ဘာတလွှားမှ စုံတွဲများ ဟန်းနီးမွန်းထွက်ရာ မော်ဒိ(ဗ်)ကျွန်းနိုင်ငံ (The Honeymoon Paradise, Maldives)
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးဧဝရက်တောင်ကြီးရှိရာနီပေါသို့ … Nepal where Mt.Everest exists
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့တော်ထဲက စပိန်ရှေးမြို့ဟောင်း (Intramuros, Spainish Old City in Phillipines)
ခြင်္သေ့မြို့တော် စင်္ကာပူ (Singapore, Lion City)
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးမှန် ကြမ်းပြင်ရှိရာ Lotte World Tower (Highest Glass Floor in Lotte World Tower)
ကိုရီးယားတို့ရဲ့ရတနာ ဂယောင်ဘောက်ကွန်းနန်းတော်ရာ Gyeongbokgung Palace, the Gem of Korea
Taiwan, Asia’s Heart
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ အသည်းနှလုံး နေလရေကန် Taiwan Sun Moon Lake
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဆွစ်ဇာလန်လေး ချင်းမိုင်ရောက်နေ့ရက်များ (Chiang Mai)
ဘန်ကောက်ကနေ နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ရတဲ့ ခေါင်းရိုင်က အီတလီရွာလေး (Khao Yai, Little Italy of Thailand)
ချစ်စဖွယ် နတ်မြင်းပျံလေးတွေရှိတဲ့ Bangkok က Unicorn Cafe
ဖူးခက်ကမ်းခြေ (Fly me to the Phuket Beach)
မြစိမ်းရောင်ပင်လယ်ကြီး၏ နဂါးရတနာ ဟလောင်ဘေး (Ha Long Bay, the Dragon Jewel of Emerald Sea)
ဗီယက်နမ်က ငါးမည်ရမြို့လေး ဒါလတ် Dalat, Vietnam
ဗီယက်နမ်က ပုံပြင်လိုနေရာလေး ဘာနာဟေး (Fairy Tale Land of Vietnam, Bana Hills)
ထူးခြားလှပ သဘာဝများစုစည်းရာ မဟာသမုဒ္ဒရာလမ်းမကြီး (Great Ocean Road, Australia)
ဩစတြေးလျမှ ရှားပါးတိရစ္ဆာန်လေးများ (Unique Animals from Australia)
သြစတြေးလျမှ Puffing Billy ရေနွေးငွေ့သုံး ရှေးဟောင်းအပျော်စီး မီးရထားလိုင်း
ဆစ်ဒနီမြို့မှ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လူလုပ်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ၂၀ရာစုနှစ်အကောင်းဆုံး ဗိသုကာလက်ရာ ကဇာတ်ရုံ (Sydney Harbour & Opera House)
ဥရောပနိုင်ငံများကြား ပြေးဆွဲနေသည့် Eurail အဆင့်မြင့် မီးရထားလိုင်း
အနုပညာမြို့တော် ဗီယာနာသို့ Vienna, the City of Art
ပုံပြင်ထဲက မြို့လေးလား ထင်မှတ်မှားရသည့် ဥရောပမှ ရေပေါ်မြို့လေး (Bruges,afairy tale town of Belgium )
ဗိသုကာလက်ရာစုံ မြင်တွေ့နိုင်သည့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ (Czech Republic)
မိုစတာမြို့၏ အထင်ကရ ရှေးဟောင်းတံတားကြီး
ဒဏ္ဏာရီထဲက ကမ်းခြေမြို့လေး ဒူဘရိုနစ်(ခ်) (Dubvronik, Croatia)
Denmark မြို့တော် Copenhagen
ပုံပြင်ထဲရောက်သွားသလို ခံစားခဲ့ရသော Estonia မြို့တော် Tallinn မြို့ဟောင်းကြီး
ခရစ္စမတ်ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ ဇာတိမြို့လေး Rovaniemi
သဘာဝအလှနှင့် လူလုပ်အနုပညာပေါင်းစုံရာ ပြင်သစ်ကမ်းခြေမြို့ Nice (Nice, French Riveria)
ဝိုင်အစပြုရာ ဂျော်ဂျီယာမှ လည်စရာများ (Attractions of Georgia)
နတ်သမီးပုံပြင်ထဲက ရဲတိုက်ကြီးသို့ (Sleeping Beauty Castle, Neuschwanstein)
စုံတွဲတွေရဲ့ အိပ်မက်ကျွန်းလေး ဆန်တိုရီနီ (Santorini)
အိုက်စလန်မှာ ဥတ္တရအလင်းတန်း ရှာပုံတော် ဖွင့်ခဲ့တုန်းက… (Northern Light Hunt in Iceland)
ကမ္ဘာကျော် ရေပေါ်မြို့လေး ဗင်းနစ် (Venice, Floating City)
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ရဲတိုက်နိုင်ငံငယ်လေး လူဇင်ဘတ် (Luxembourg)
ဥရောပ ကမ်းခြေနိုင်ငံလေး မွန်တီနီဂရိုး Montenegro
ကျူးလစ်ပန်းရောင်စုံများပွင့်လန်းရာ နယ်သာလန်ရှိ ပန်းဥယျာဉ်ကြီး
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံ ရုရှား (Russia, World’s Largest Country)
သဘာဝရေပူစမ်းများရှိရာ ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံ (Slovakia)
ဆန်းကြယ်ထူးထွေ စပိန်နိုင်ငံက Park Guell
ကျွန်မနှင့် ဆွစ်ဇာလန် ထောင်တွင်းနှစ်ညတာ (My2days Jail Experience in Switzerland)
ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံ ဗာတီကန်စီးတီး World Smallest Country, Vatican City
ကန္တာရထဲက မိုးမျှော်တိုက်များနှင့် ချမ်းသာလှသည့် ကာတာနိုင်ငံ (Qatar)
ထူးဆန်းသော သဘာဝတရားများ၊ မြင့်မားသော သမိုင်းကြောင်းများနှင့် တူရကီ (Turkey,aUnique Country)
ဥရောပတိုက်နဲ့ အာရှတိုက် နှစ်ခုကိုခွထားတဲ့ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့လေး
World’s First Psychiatric Hospital from Turkey
Dubai Desert Safari – Camel Riding, Dune Driving & Belly Dancers
အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အမြင့်ဆုံး မြေသားတောင် ခေါနူးစုမ် (ခေါ်) နတ်မတောင် (Chin Hills, Myanmar)
ကိန္ဒရီ ကိန္ဒရာမြို့တော်လွိုင်ကော်ရောက် နေ့ရက်များ… (Kayah, the land of Kayan- Long neck hill tribe of Myanmar)
မန္တလေးမှ ဒီးဒုတ်ရေပြာအိုင် (Cyan Lake of Mandalay, Myanmar)
ဒီးဒုတ်သဘာဝလှိုဏ်ဂူ (Dee Doke Cave)
ဆောင်နိုင်ကြီးရေတံခွန်နဲ့ ကျိုက်ထီးရိုး နေ့ချင်းပြန်ခရီး ( Golden Rock Pagoda, Myanmar)
လှလှပပ ငပလီကို သက်သက်သာသာသွားပြီး ထူးထူးခြားခြားဘာတွေလုပ်မလဲ Ngapali Beach, Myanmar
မုံရွာကို ပိတ်ရက်မှာသွားကြမယ် (Monywa, Myanmar)
အင်းလေးနားတဝိုက်က ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ ထူးထူးခြားခြားအိမ်(၄)အိမ်
မြန်မာပြည်တောင်ဘက်စွန်း မြိတ်ကျွန်းစုမှ နေသာသာ ရေပြာပြာ နေ့ရက်များ (Sunny days in Southernmost Part of Myanmar)
Mummy, Bananas & Me
My TV Talk Shows
My Health & Beauty Blog
About Nu Myat
Dr Nu Myat Theingi Oo Facebook Page
Greetings from Nu Myat
Tag: Honey Moon Destination
September 14, 2015 April 21, 2021 Posted in Adventure, Asia, Maldives, Natural Wonder, TravelTagged adventure, Asia, Beach, Club Med Kani, Honey Moon Destination, India Ocean, Island, maldives, Nu Myat around the World, Ocean, Travel, Underwater2 Comments
Honey Moon ထွက်ရာ
Nu Myat at Club Med Kani Resort, Maldives
Club Med from bird eye view
Nu Myat just outside the Lagoon suite of Club Med
စိမ်းပြာရောင်သန်းပြီး ကြည်လင်ရှင်းသန့်သော ရေပြင်၊ ဖြူလွှဝင်းပသော သဲသောင်ပြင်၊ သမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာသည့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော လေကောင်းလေသန့်၊ ရေပေါ်ရေအောက် လှပသော ရှုခင်းများ၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်စွာ ဆောက်လုပ်ထားကြသည့် အပန်းဖြေစခန်းဟိုတယ်များကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ စုံတွဲများ ပျားရည်ဆမ်းခရီး Honey Moon ထွက်ရာ၊ ကမ်္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ အနားယူအပန်းဖြေရာ ကျွန်းနိုင်ငံအဖြစ် နာမည်ကြီးနေသော Malvides (မော်ဒိဗ်စ်)နိုင်ငံအကြောင်းကို စာအုပ်၊ ရုပ်ရှင်နှင့် ဓာတ်ပုံများ၌သာ တွေ့ ဖူးပြီး သဘောကျနေမိခဲ့ပါသည်။ ထိုကဗျာဆန်သော နိုင်ငံသို့ တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန် ချိန်မှာ အရောက်သွားမည်ဟုလည်း စိတ်ကူးယဉ်မိဖူးခဲ့ပါသည်။
စိတ်ကူးထဲမှာ ရွက်လွှင့်သွားဖြစ်ခဲ့သော ထို Malvides နိုင်ငံသို့ Sun Far Travels & Tours ၊ Bangkok Airways နှင့် ထိုနိုင်ငံရှိ Club Med Kani ဟိုတယ်တို့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ 2014 ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်မှ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့အထိ စာရေး သူ သုံးရက်တာသွားရောက် လည်ပတ်လေ့လာခဲ့ရပါသည်။ Malvides နိုင်ငံနှင့် Club Med Kani ဟိုတယ် အကြောင်း မြန်မာမှာ ပိုပြီးသိရှိရင်းနှီးစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး မြန်မာမီဒီယာများကို ဖိတ်ကြားခဲ့သည်ဖြစ်ရာ စွယ်စုံမီဒီယာဂရု(ပ်) (The Chic Magazine) မှ ကျွန်မ ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦးနှင့်အတူ အခြား မီဒီယာများဖြစ်ကြသော Forever Group (MRTV-4) ၊ ရန်ကုန်မီဒီယာဂရု(ပ်) Inforithm Maze မီဒီယာ၊ Asia Fame မီဒီယာဂရု(ပ်)၊ မြန်မာတိုင်း(မ်)ဂျာနယ်၊ Travellers ဂျာနယ်နှင့် မန်္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာတို့မှ မီဒီယာသမားများ သွား ရောက်လေ့လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
Myanmar Media group & Bangkok Airways team
Malvides နိုင်ငံသည် အိန်္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင်း အာရှတိုက်ထဲမှာရှိသော အာ ရှနိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း မြန်မာခရီးသွားများနှင့် သိပ်ပြီး အကျွမ်းတဝင်မရှိကြသေးပါ။ Malvides နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့် ခရီးသွားများအနေဖြင့် ဗီဇာမလိုအပ်သဖြင့် သွားလာရလွယ်ကူပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် Bangkok Airways လေကြောင်း ဖြင့် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ Malvides သို့လေယာဉ်ပျံသန်းချိန်မှာ လေးနာရီကျော်သာ ကြာမြင့်ပြီး မြို့တော် Male (မာလေး)၏ ကပ်လျက်ကျွန်းရှိ လေဆိပ်မှ တည်းခိုမည့်ဟိုတယ်သို့ ဟိုတယ်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် Speed Boat များဖြင့် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
Maldive international airport. A separate island for an airport
Speed Boat welcoming the customers
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ အနောက်တောင်ဘက် ၄၃၀ မိုင်အကွာနှင့် အိန်္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်တောင်ဘက် ၂၅၀ မိုင်အကွာ အိန်္ဒိယသမုဒ်္ဒရာ ထဲတွင် တည်ရှိနေသော Malvides နိုင်ငံသည် ကျွန်းပေါင်း ၁၁၉၂ ကျွန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကျွန်းနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ထိုကျွန်းများအနက် ကျွန်းပေါင်း ၁၉၂ ကျွန်းပေါ်မှာသာ လူနေထိုင်၍ တစ်နိုင်ငံလုံးလူဦးရေမှာ စုစုပေါင်း ၃၉၀၀၀၀ ကျော်သာရှိသည်။ နိုင်ငံအကျယ်အဝန်းမှာ ၁၁၅ စတုရန်းမိုင်သာရှိ၍ လူဦးရေအရရော အကျယ်အဝန်းအရပါ အာရှမှာ အသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Male, the capital of Maldivesl
နိုင်ငံ၏ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရေပြင်ဖြစ်ပြီး ကုန်းမြေအမြင့်မှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ ၄ ပေ ၁၁ လက်မ အထက်သာမြင့်သဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြေမျက်နှာပြင်အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၇ ပေနှင့် ၁ လက်မခန့်သာရှိပါသည်။ ထိုသို့ မျက်နှာပြင်နိမ့်မှုကြောင့် များမကြာမီနှစ်များအတွင်း ပင်လယ်ရေအောက်ကို ရောက်ရှိသွားနိုင်သည့် နိုင်ငံအဖြစ်လည်း ခန့်မှန်းထားကြပါသည်။ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးခံရနိုင်သည့် တတိယ မြောက်အန္တရာယ်အရှိဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ထိုသို့ သဘာဝအန္တရာယ်များသောကြောင့်လည်း Malvides နိုင်ငံသည် ကမ်္ဘာပေါ်မှာ ထင်ရှားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောင်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကျွန်း များ ရေအောက်ရောက်မသွားခင်၊ သဘာဝအလှတရားများ ကွယ်ပျောက်မသွားခင် သွားရောက်လည်ပတ်လိုသောဆန်္ဒကြောင့် ကမ်္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ တစ်နေ့ တခြားများပြားလာရခြင်းဖြစ်၏။ ၁၉၆၅ ခုနှစ် ဗြိတိသျှကိုလိုနီမှ လွတ်မြောက်ပြီး ကာလ ၁၉၇၅ ခုနှစ်က စတင်ကာ ဟိုတယ်များဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဟိုတယ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိကြောင်းသိရ၏။ များသောအားဖြင့် ဟိုတယ်များကို တည်ဆောက်ရာမှာ ကျွန်းတစ်ကျွန်းကို ဟိုတယ်တစ်ခုစီ ဆောက်ထားခြင်းသည်လည်း Malvides နိုင်ငံ၏ ထူးခြားချက်တစ်ခုပင် ဖြစ်ပေသည်။
Couple at Sun Rising
ထိုကဲ့သို့ Maldives(မော်ဒိဗ်)နိုင်ငံ၏ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်များ၌ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော Club Med ဟိုတယ်သည် Kani(ကာနီ)ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးပေါ်၌ ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်၍ မြို့တော် Male(မာလေး)အနီးရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ရှိရာကျွန်းမှ မိနစ် ၂၀ ကြာ Speed Boat ဖြင့် သွားရောက်နိုင်သည်။ ဟိုတယ်၏ ဝန်ဆောင်မှုများအနက် လေဆိပ်မှ ဟိုတယ်သို့ အကြိုအပို့ပါရှိသည်ဖြစ်ရာ ဧည့်သည်များ လေယာဉ်ဆိုက်ရောက်သည့်အချိန်၌ ဟိုတယ်မှ Speed Boat ဖြင့် ဧည့်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်ပေးနိုင်ရန် ခန့်မှန်းထားသည့် G.O (Gentil Organisateurs)ဟု ပြင်သစ်လို အတိုကောက် ခေါ်သည့် ဖော်ရွေသော ဧည့်ကြိုများက လာရောက်ကြိုဆိုပေးပါ၏။
Speed Boat Ferry
Club Med ဟိုတယ်၏ ထူးခြားချက်များအနက် ထို G.O များလည်း ပါဝင် ၏။ အထူးကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုကို အခြေခံထားသည်ဖြစ်ရာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များအတွက် ယဉ်ကျေးဖော်ရွေသော G.O များကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ခန့်ထားပြီး Club Med လူမျိုးပေါင်း ၂၂ မျိုးရှိကြောင်း သိရ၏။ ထို G.O များသည် ဧည့်ဝတ်ကျေရုံမျှမက အဆို၊ အက ပညာရပ်များ၌ပါ ကျွမ်းကျင်ကြသည် ဖြစ်ရာ ညတိုင်း ဧည့်သည်များ မပျင်းရလေအောင် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီဖြင့် တစ်နာရီကြာမျှ စင်မြင့်ထက်၌ ဖျော်ဖြေလေ့ရှိရာ တကယ့်ဝါရင့် အဆို၊ အကပညာရှင်များကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်ကြသည်ကို တွေ့ရ၏။
G.O performing at the night party
G.Os invite all guests to dance together with them
Lagoon Suite Lounge
Club Med ဟိုတယ်၌ အခန်းအမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိရာ ဈေးသက်သာ သော Superior Room ၁၃၅ ခန်း၊ ကမ်းခြေနှင့် ကပ်လျက်ရှိနေသည့် Beach Villa ၂၄ ခန်းနှင့် သမုဒ္ဒရာရေပေါ်ခြေတံရှည်အဆောင်များဖြင့် တည်ဆောက် ထားသည့် လူကြိုက်အများဆုံး Lagoon Suiteအခန်း ၇၅ ခန်းရှိကြောင်း သိရ၏။ မည် သည့်အခန်းမှာတည်းသည့် မည်သည့်ဧည့်သည်မဆို နံနက်စာ၊ နေ့လယ်စာနှင့် ညစာများကို နိုင်ငံတကာစားဖိုမှူးများ ချက်ပြုတ်ထားကြသည့် International ဘူဖေးနှင့် ပင်လယ်စာများ ကြိုက်သလောက် သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် Sunset Bar နှင့်Iru Bar တို့၌ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ အအေး၊ ကော့တေး၊ ဘီယာ နှင့် အရက်မျိုးစုံကို ကြိုက်သည့်အချိန်၌ စိတ်ကြိုက်သောက်သုံးနိုင်သဖြင့် ဧည့် သည်များအတွက် အထူးအဆင်ပြေလှ၏။
Mocktail from Sunset bar
ထို့ပြင် ကမ်းခြေ Activities များဖြစ်သည့် ရွက်လွှင့်ခြင်း၊ ရွက်လွှင့်သင်ခြင်း၊ လှေလှော်ခြင်း၊ သမုဒ်္ဒရာရေပြင်တွင်းရှိ ငါးများကြည့်ခြင်း(Snorkeling)၊ အက သင်ခြင်း၊ ယောဂကျင့်ခြင်း၊ ရေကူးကန်ထဲ၌ ဂိမ်းဆော့ခြင်း(Aqua Gym)အစီ အစဉ်များကို အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်သည့်အတွက် Resort မှာ အခန်းယူလိုက်သည် နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အပိုငွေတောင် ဆောင်စရာမလိုသည်အထိ အဆင်ပြေလှပါ၏။
Aqua Gym Pool Games
This is us underwater
အကယ်၍ လှေစီးခြင်း၊ Jet Ski စီးခြင်း၊ ရေအောက်ငုပ်ခြင်း(Scuba Diving)၊ ရေဘောလုံးအတွင်း ဝင်ကစားခြင်း(Water Ball)၊ သမုဒ္ဒရာအတွင်း သင်္ဘောစီးကာ နေဝင်ချိန်အလှ ရှုစားခြင်း(Sunset Cruise)၊ မာလေးမြို့တော် သို့ သွားလည်ကာ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းနှင့် Spaဝန်ဆောင်မှုများ စသည်တို့ကို ပြုလုပ်လိုပါကလည်း အခကြေးငွေ ထပ်ဆောင်းကာ ပြုလုပ်နိုင်ပါ၏။
Dolphins at Sunset Cruise
စုံတွဲများနှစ်သက်သည့် ရေပေါ် Suite အခန်းများ၏ ထူးခြားမှုများမှာ အခန်းများသည် ကြည်လင်သော စိမ်းပြာရောင် သမုဒ်္ဒရာရေပြင် ပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်ထားခြင်း၊ အထူးလှပသော ရှုခင်းများကို အိပ်ရာထဲမှ မြင် တွေ့ရနိုင်ခြင်း၊ အခန်းထဲမှ ထွက်သည်နှင့် သမုဒ်္ဒရာထဲဆင်းနိုင်ရန် စီစဉ်ထား ခြင်း၊ ရှမ်ပိန်ပုလင်းနှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာများ စိတ်ကြိုက်စားသောက်နိုင်ခြင်း၊ လှပဆန်းသစ်သော ဧည့်ဆောင်ရှိခြင်းစသည့်အချက်များပင် ဖြစ်သည်။
Just outside the lagoon suite
Welcome from Lagoon Suite
ရွဳ ခင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေသာ Bathroom
ထိုကဲ့သို့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ထားခြင်းကြောင့်လည်း ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှ စုံတွဲများဧ။် Honey Moon Destination ဖြစ်လို့နေခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဤကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်ပြီး လှပသာယာသည့် Club Med Kani Resort သို့ သွားရောက်အပန်းဖြေလိုသူ မြန်မာခရီးသွားများအတွက် Bangkok Airways နှင့်Club med Kani တို့ပူးပေါင်းကာ အထူးသက်သာသော ဈေး နှုန်းများဖြင့် ၂ ညအိပ် ၃ ရက်ခရီး package များကို စီစဉ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ပုံမှန်ဈေးနှုန်း အခန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ မှ ၂၅၀၀ ကျော်ရှိရာမှ Promotion ကာလများတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ ကျော်မှ ၁၉၀၀ ကျော်အထိ ဈေးလျှော့ပေးလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
Nu Myat at Sunset
Sunset into India Ocean
Words & Photographs by Nu Myat Theingi Oo
ကိုဗစ်ကာလ လူနာတွေ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့
Natural Formation of Rock Valley called Jet Kyar in Yay Nan Chaung, Myanmar
Crossing over the Old Bridge of Old City of Mostar in Bosnia & Hazegovenia
Crystal Clear Turquoise Blue Water... In the river running under the old bridge of Mostar in Bosnia & Hazegovenia
Amazing Interiors of Hagia Sophia...
Recent Posts: DR NU MYAT THEINGI OO
Shopping ထွက်ရာမှာ သိသင့်သောအချက်များ
Follow NU MYAT AROUND THE WORLD on WordPress.com
Join 44,831 other followers
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံ ရုရှား (Russia, World's Largest Country)
Nu Myat is the chief editor of The Chic Magazine
Adventure Africa america Animals Asia Australia China Dubai Europe Heritage Japan Leisure Malaysia Maldives Myanmar Nara Natural Wonder Netherlands Photo Essay Street Photography Switzerland Thailand The Grand Canyon Travel Turkey UAE Uncategorized United States Vietnam Yangon